ကဲ ... ကိုxxx က ရာသီစလာတဲ့နေ့က စပြီး ရေတွက်လာတဲ့ ၁၂-ရက်နေ့မှာ ဆက်ဆံမိတယ်... ကိုxxx အဖိုသုတ်ပိုးက ဆက်ဆံဖက်ရဲ့ မိန်းမကိုယ်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့မယ်... ဆက်ဆံဖက် အမျိုးသမီးရဲ့ မမျိုးဥက ၁၄-ရက်နေ့မှာ ကြွေတယ် ဆိုကြပါတော့... ကိုxxx ကိုယ်ပွားလေးနဲ့ ဆက်ဆံဖက်အမျိုးသမီး ကိုယ်ပွားလေးတို့ တွေ့ကြပြီး... အဟဲ.. နောက်ထက် ၁၀-လလောက်နေရော Jr. xxx လူ့လောကထဲ ရောက်လာရော...
အဲဒီတော့ ... ကိုယ်ဝန်မရချင်သေးဘူးဆိုရင် ၁၄-ရက်ဝန်းကျင်မှာ မမျိုးဥကြွေတတ်တယ်ဆိုတော့ မမျိုးဥ အသက်ရှင်တဲ့ ၂-ရက်ရယ်၊ ဖိုသုတ်ကောင် အသက်ရှင်နိုင်တဲ့ ၃-ရက်ရယ် ပေါင်း ၅-ရက်ရှိမယ်... ပိုစိတ်ချရအောင် ၁-ရက်လောက်ထပ်ပေါင်းပြီး မမျိုးဥ ကြွေနိုင်တဲ့ ရှေ့မတိုင်မှီ ၆-ရက် နဲ့ နောက် ၆-ရက်မှာ ဆက်ဆံမှု မပြုပါနဲ့... ပြုမယ်ဆို ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တယ်... မအောင့်နိုင်ရင် အကာအကွယ်သုံးဗျို့...
အလွယ်နည်း မှတ်မယ်ဆို မိန်းကလေးရဲ့ menstrual cycle က ၂၈ ရက်ဆိုရင် လေးပိုင်းပိုင်းလိုက်ပါ... ရာသီသွေး စလာတဲ့နေ့ကို ၁-ရက်လို့ မှတ်ဗျာ... ပြက္ခဒိန်က ၁-ရက်ကို ၁-ရက်လို့မှတ်ရင် မှားသွားလိမ့်မယ်...
ရာသီသွေး စလာတဲ့ ၁-ရက်နေ့ ကနေ ၇-ရက်နေ့အထိ စိတ်ချရတဲ့ရက်တွေ... ဖိုသုတ်ကောင် သက်ရှည်ကျန်းမာနေရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး ...
၈-ရက်နေ့ကနေ ၂၀-ရက်နေ့အထိ အောင့်ထားဗျို့... စိတ်မချရတဲ့ ရက်တွေ... ကလေးလိုချင်ရင်တော့ ဒီရက်ထဲမှာ အသည်းအသန် ကြိုးစား...
၂၁-ရက်ကနေ ၂၈-ရက်အထိလည်း စိတ်ချရတဲ့ရက်တွေဗျို့... လှော် သာ လှော်...
မိန်းကလေးရဲ့ menstrual cycle က ၃၀ ရက်ဆိုရင် ဘယ်လိုလဲ ဟုတ်လား... ဒါများ အလွယ်လေး ၁၅-ရက် ၀န်းကျင်မှာ မမျိုးဥ ကြွေနိုင်တယ်... မမျိုးဥ အသက်ရှင်နိုင်တဲ့ ၂-ရက်ရယ်၊ ဖိုသုတ်ကောင် အသက်ရှင်နိုင်တဲ့ ၃-ရက်ရယ်၊ လိုရမယ်ရ ၁-ရက်ရယ် ပေါင်း ၆-ရက်ကို ၁၅-ရက် ရှေ့နဲ့ နောက်မှာ ထည့်လိုက်ဗျာ အောက်မှာကြည့်လိုက်တော့ဗျာ... အစိမ်းနဲ့ပြထားတဲ့ ရက်တွေဆို စိတ်ချနိုင်တယ်... ဆက်ဆံလို့ရတယ်... အနီနဲ့ပြထားတဲ့ ရက်တွေဆိုရှောင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တယ်...
မင်းသမီးလေး (မမျိုးဥ) က မင်းသားလေး (ဖိုသုတ်ကောင်) အလာကို စောင့်မျှော်နေတယ်... ဒီလမှာ မင်းသားလေး သူ့ဆီကို အခစားမ၀င်ဘူး ဆိုရင် ငိုချလိုက်တာပဲ... မင်းသမီးလေး ငိုရင် အီဗာတွေ ဘာတွေနဲ့ မျက်ရည်သုတ်ပေါ့... ကလေးမလိုချင်သေးတဲ့လူတွေ ပျော်ပေါ့ဗျာ... ဟော... မင်းသမီးလေးဆီ မင်းသားလေးက ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာရင် မျက်ရည်မဖြစ်တော့ဘဲ အဟာရအဖြစ်စားသုံးရင်း နောက် ၁၀-လလောက်လည်းနေရော ဂျူနီယာလေးတွေ လူ့လောကထဲရောက်လာရောဗျာ...
မောင်လှ သိလှချည်လား မလုပ်ပါနဲ့... ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတုန်းက Reproductive Health နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ၇-ရက်သင်တန်း တက်ခဲ့ဖူးပြီး သင်တန်းပြီးတော့ ဆင့်ပွား သင်တန်းတွေ ဖွင့်ဖို့ ဆရာဖြစ်သင်တန်းလည်း တက်ခဲ့ဖူးပါတယ်... အဲဒီ သင်တန်းတွေက သင်ပေးခဲ့တာတွေပါ...
မှားနေရင်တော့ ဆရာဝန်များ၊ ဆေးပညာနားလည်သူများ ပြင်ပေးကြပါ...
NativeMyanmar.com မှာ အခြားသူတွေ ဆွေးနွေးထားတာကိုလည်း သွားဖတ်ကြည့်ပါဦး...
စွယ်စုံရ ကိုတုံပါလား :)
ဗဟုသုတရတဲ့ ပို့စ်တွေ ဖတ်ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
ဗဟုသုတရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ :)
ခေါင်းစဉ် မြင်ပြီးတော့ ဘုရားတမိတယ်။ ကိုမောင်လှကြီးများ “...” :)
mghla ရဲ့ insideout ပါလားဗျ။
ဟဲ ဟဲ.. အသုံးတော့ အတော်ဝင်သား..
ရဲရဲတောက်တဲ့ အမှတ် ၁ ကျောင်းသား အတွက်
အ ဟား.. ကဗျာတိုလေးရေးထား..
Woo! God Must be crazy!
တွက်ရမှာ ပျင်းတဲ့အတွက် မျက်ရည်ကျတဲ့ သတင်းကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်ရတဲ့ ဘဝပါဗျာ... အဟိ..
ဟုတ်ကဲ့ ကိုမောင်လှခင်ဗျား ရာသီလာနေတယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်ဝန်ရှိနိူင်ပါသေးလားခင်ဗျား .. မျက်ရည်ကျနေပမယ့် လန့်လို့ပါ... :)
၁၄ရက် ၁၅ ရက်လောက်မှာ အဖော်မပါပဲအတူနေမိတယ်
အဲဒါမျိုးဆို ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေ ဘယ်လောက်ရှိလဲမသိဘူး
Tay Za said…
အကိုရေ ရာလာပြီ ထပ်လာတာကကော် ဘာကြောင့်များပါလိမ့်
ရာသီလာတဲ့ ရက်​က ဘယ်​​လောက်​ကြာတုန်းဗျ
ဥပမာ ၂၅ ရက်​​နေ့ လာတဲ့ သူဆိုပါ​တော့